Kindle Oasis, ilay 'eReader' vaovao miaraka amin'ny efijery sy mahatohitra rano | Vaovao momba ny gadget
Ruben gallardo | | Amazon, General
Amazon dia manana mpamaky e-book vaovao. Mitombo ny isan'ireo Kindle anao, toy ny haben'ny dikan-teny farany. Ilay mpamaky vaovao Natao Batisa tamin'ny anarana Kindle OasisHo hita amin'ny kinova 3 izy io ary, amin'ny maha-zava-baovao anao, azonao atao ny mampiasa azy anaty rano.
The Kindle Oasis dia mpamaky voamarina IPX8. Izany dia miteraka Azonao atao ny mampiasa azy anaty rano amin'ny halalin'ny 2 metatra sy mandritra ny 60 minitra. Aorian'ity fotoana ity dia tsy afaka manome toky anao ny orinasa fa mbola mandeha tsara ny fitaovana na misy rano miditra amin'ny faribolany.
Amin'ny lafiny iray, ny Kindle Oasis dia mampitombo ny efijery ho 7 santimetatra manolotra 300 dpi. Amazon dia nilaza fa miaraka amin'ity fiakarana ity sy ny fampiasana ny haben'ny font default, dia mahazo teny 30% fanampiny isaky ny pejy. Raha atao teny hafa, dia tratra ny fihenan'ny pejy. Ary koa, tsy tokony hanahy momba ny famakiana amin'ny alina ianao, satria ity maodely ity dia manana jiro backlight amin'ny efijery noho ny fampiasana LED 12.
Ny Kindle Oasis dia manify ary manana lamosina alimina, manome azy bebe kokoa Premium. Etsy ankilany, azonao atao ny mahita azy amin'ny kinova 3: ny iray manana fahaizana 8 GB ary roa amin'ny 32 GB. Ireto roa farany ireto dia hanana ny iray amin'izy ireo miaraka amin'ny fifandraisana WiFi ary ny iray hafa dia manambatra WiFi amin'ny fifandraisana 3G mba hahafahanao misintona ireo boky amin'ny fotoana rehetra tianao.
Miaraka amin'ny Kindle Oasis koa dia natomboka fonony vaovao izay, rehefa napetraka teo ambonin'ilay eReader, azo ampiasaina ho fanohanana hamaky bebe kokoa amin'ny fisaka. Ny Kindle Oasis dia hamidy amin'ny 31 Oktobra, na dia azo atao aza izao ny mitahiry azy amin'ny fomba maodiny rehetra - ao anatin'ny dingana mialoha ny varotra izany.
Ireto ny vidin'ny kinova telo: 249,99 euros ho an'ny maodely 8 GB; 279,99 euros ho an'ny maodely 32 GB misy fifandraisana WiFi; Y 339,99 euros ho an'ny kinova fampiasa indrindra: 32 GB fitehirizana anatiny sy fifandraisana WiFi + 3G.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Amazon » Kindle Oasis, ilay 'eReader' vaovao misy efijery sy mahatohitra rano kokoa
Razer dia afaka nanolotra 'smartphone' ho an'ny mpilalao amin'ny 1 Novambra
Super Retro-Cade, ny safidy Retro-Bit ho an'ny mpilalao rehetra